श्रीलंका बन्ने भयो नेपाल, यसरी भयो खुलासा! - Media Dabali
श्रीलंका बन्ने भयो नेपाल, यसरी भयो खुलासा!
काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल पनि श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्नसक्ने बताएका छन्।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल श्रीलंका बन्न सक्ने बताएका हुन्। उनले अत्याधिक आयात गरेर भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिसमेत सिध्याउँदै गएकाले अब आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले उत्पादन नभइ विदेशबाट नै आयात गर्नाले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आइरहेको बताए। गनर्भर अधिकारीले मौद्रिक नीति जादुको छडी नभएको बताए।
उनले मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनरुप सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने गरी ल्याइने बताए। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति बनाउनको लागि सरकारको बजेटले दिएको मार्ग दिएको बताए। उनले पछिल्लो समय बैंकहरुमा ब्याजदर बढ्दै गएको र अझै बढ्नसक्ने बताए।
चीनले आर्थिक रूपले डुबायो श्रीलंकालाई, विद्यार्थीलाई परीक्षामा कागज किन्ने पैसासमेत भएन
आर्थिक संकटको बीचमा श्रीलंकाले सुन बेच्दै
सोमवार, बैशाख १२ २०७९११:३१:२३